HORUMARINTA HORUMARINTA CALADIUM EE GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Xaggee laga helaa kubadda, doorka booska geedaha kulaylka jecel
Caladium (Caladium)- wakiilka qoyska Aroid (Araceae). Waddanka reer warshaddan waa Brazil, halkaas oo ay ku korto xeebaha Amazon. Tani waa warshad kuleyl badan oo kuleyl ah, taas oo xaaladaha dabiiciga ah ay gaari karaan ilaa 5 m ee dhererka.
Guriga, Caladium waxaa loo adeegsadaa soo saarida nalalka galka, iyo aagaggeena geedkan waa mid caan ah sababtoo ah muuqaal qurxoon. Caladium wuxuu jecel yahay meelo diirran, oo qoyan. Wixii kobcin wanaagsan, waxaa ka wanaagsan inaad doorato dhinaca galbeedka iyo bariga.
Heerkulka ugu haboon waa + 20 ... + 25 ° C. Iftiimintu waa inay noqotaa mid dhalaalaya, laakiin ma toosin. Waxaa fiican inaad doorato iftiin kala duwan. Qoyaanku waa inuu aad u sarreeyaa. Haddii aad isticmaashid qalabka wax lagu dhejiyo, ku sii daa caleemaha.
Ma taqaanaa? Magaca caanka ah ee Caladium waa "dhagaha maroodiga" (sababtoo ah xajmiga caleemaha).
Qodobada ka soo degaya Caladium
Caladium waxay u baahan tahay daryeel gaar ah guriga. Fikrad gaar ah waa in la siiyaa waraabinta iyo quudinta.
Sida loo doorto dheriga iyo dhirta warshad
Dheriga cabbirka waa inay ahaataa laba jeer sida weyn oo ah tuber ubax ah. Haddii aad rabto in aad ku beeri 2-3 digriiga, dheriga waa ka fiican si ay u soo qaado 10 cm dhexroor. Haddii digriiga dheeraad ah, dooro dheri leh dhexroor ah 15 cm ama ka badan.
Haddii aad isku dhufato miraha calormoonka, waxaa fiican inaad soo qaadato dherer yar, ka dibna kaliya gawaarida dheriga weyn. Hannaanka degitaanka waa mid sahlan. Waxa ugu muhiimsan waa inaad si joogto ah u sameyso: Derejo dheeri ah oo ku taal hoose ee dheriga, lakabka ciidda saaro dheecaan (waxaa fiican inaad isticmaasho ciid qalalan oo qalalan).
Goobta hore u diyaarso si aad ugu beerto sanduuqa ku xardhan, qoyan yar. Dhexdheerta buurta, ka samee ceel, ka buuxi ciid, dhirta Kalady halkaas ka samee, sidaa daraadeed kaliya seddex meelood oo ka mid ah tuber ayaa dhulka hoostiisa ku shub, kula saydhaa carrada haray ee kor ku xusan.
Waa muhiim! Haddii aad rabto in aad hesho caleemo dheeraad ah, ma digriiga loogu talagalay taranta, ka dibna waa in lagu dhajiyo heerarka dhulka.
Sida loo daryeelo gawaarida ka hor inta aan la samaynin xididdada
Qodobka ugu muhiimsan ee daryeelka xanaanada ka hor inta aan la samaynin xididdada - dheecaan wanaagsan. Ka dib markii abuurka la beeray ama digriiga lagu beeray, waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo heerkulka + 25 ... + 30 ° C.
Si arrintan loo sameeyo, waxaad dabooli kartaa warshadda leh daboolka ama dhalada (laakiin iftiinka wali waa la gooyaa). Waxaad ubaahan tahay inaad biyo ku qasto 2-3 maalmood, ka dibna "hawo saar" dheriyada.
Xeerarka quudinta iyo waraabinta biyaha
Caladium wuxuu u baahan yahay waraabin badan inta lagu jiro muddada koritaanka ugu firfircoon, gaar ahaan xagaaga. Caleemaha waaweyn waxaad u baahan tahay qadar badan oo ah qoyaan, haddii kale, biyo la'aan, caleemuhu waxay luminayaan muuqaalkooda qurxinta. Qiyaastii Caladium waa inay ku qoslaan hawada, abuurista saameynta "fog".
Laakiinse ha badinina! Dhibbo badan oo qoyan ma qallajin wakhti dheer. Meesha dhibcahaasi waxay u muuqan karaan dhibco madow. Dhamaadka xagaaga, inta jeer ee la waraabiyo waraabinta, iyo marka kalkaalintu ay dillaacdo caleemaha iyo caleemo hawlgab, waxaa la joojiyaa waraabinta.
Inta lagu jiro muddada "hurdada", waxaad yareyn kartaa ciidda leh dhalada buufin si aan xididada u dhicin. Wixii bacriminta dhirta isticmaali Bacriminta macdanta, oo ay ku jiraan fosfooraska, nitrogen iyo potassium. Waxaa ugu fiican in la siiyo qudaarta muddada koritaanka firfircoon, 3-4 toddobaad kasta.
Waa muhiim! Caladium, oo kaliya "toosi", waa in si dhexdhexaad ah loo waraabiyaa. Ka hor inta muuqaalka ka mid ah caleemaha geedka ma u baahan tahay qadar weyn oo qoyaan.
Noocyada daryeelka ee xilliga nasashada
Waqtiga nasashada ee Caladi wuxuu bilaabmaa bartamihii Oktoobar wuxuuna socdaa ilaa guga hore. Wakhtigan, ubaxa ma aha mid ku habboon waraabinta. Waxaad yareyn kartaa oo keliya carrada adiga oo ku buufinaya biyo ka dhalada buufin.
Caladium waa in loo wareejiyaa meel mugdi ah, oo qabow leh heerkulku wuxuu noqon doonaa + 13 ... + 15 ° S. Caladium uma baahna wax quudin dheeraad ah. Tuubada dhirta ayaa sidoo kale lagu keydin karaa xilliga nasashada si kale: Qaado digriiga dheriga oo ku kaydi meel diiran oo dab ah.
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato curyaanka bedelka
Guriga, Caladium wuxuu u baahan yahay inuu siiyo daryeel wanaagsan iyo beeritaanka, taas oo ah geedi socodka saxda ah ee dhirta. Waa in la sameeyaa sanadkiiba, bilawga guga.
Ka hor inta aanad soo saarin, si taxadar leh uga saari karooska dherigii hore, ka jar dhammaan digriiga la qalajiyey. Dheecaan, ciid iyo substrate (isku dar ah dhoobo, caleen iyo ciid caleen) dheriga. Ka dib markii la beero, qoyan ciidda yar.
Ma taqaanaa? Haddii aad dhirta ku shubto dheriga 3-4 cm qoto dheer, caleemuhu waxay noqon doonaan kuwo aad u ballaaran, oo midabkuna wuxuu noqon doonaa mid dhalaalaya.
Xayeysiinta Caladium, siyaabaha sahminta
Caladium waa mid aad u caan ah oo ka mid ah beeralayda ubaxa. Wixii dhalmo ah waxaa jira siyaabo dhowr ah: abuurka, digriiga, qaybinta duurka. Aan ka fekerno faahfaahin kasta oo ka mid ah hababkaas.
Digriiga gabdhaha ayaa si fiican loo isticmaalaa inta lagu jiro isu tallaalidda. On rhizome dooro tuber ugu horumarsan iyo si taxadar leh u gooyaa secateurs.
Maraqyada waxay u baahan yihiin inay "qallalan yihiin" dhuxul. Ka dib markaad heshay oo aad "qallajisay" tuber, waxaad u baahan tahay inaad ka tagto dhawr saacadood, ka dibna soo daadi, adoo raacaya dhammaan talooyinka lagu beerto Caladium.
Qaybinta rhizomes ballaaran
Haddii aad go'aansato inaad dacaayad ku sameyso dhirta adoo qaybinaya rhizomes waaweyn, markaa waa inaad ogaataa taas Iyada oo habkan, waxaa jira khatar weyn oo ah warshad cirrid. Hawlgalkan oo la isticmaalayo xamaarad fiiqan, taas oo u qaybisa tuber "jilbaha" - ee laftirka.
Qeybinta waa in la fuliyaa Maarso, sida ugu dhakhsaha badan caleemaha cusub soo baxaan. Qaybaha waxaa lagu rusheeyaa dhuxusha waxaana lagu beeray substrate. Digriiga digriiga ku daboolay caag iyo sug sug geedo 2-3 usbuuc.
Waa muhiim! Markaad isticmaasho digriiga gabdhaha ama qaabka loo kala qaybiyo baadiyaha, waa inaad doorataa kuwa digriiga ah ee haysta ugu yaraan hal buro cusub.
Seeds lagu beeray guga hore ee isku dar ah peat iyo dhulka caleen. Hal dheri, waxaad u baahan tahay inaad ku beerato qiyaastii 10 abuur (boqolleyda qorraxda 50:50).
Ka dib markii beero, abuurka waa in lagu daboolaa polyetylen. Qorraxda ugu horeysa waxay u muuqataa 2-3 toddobaad. Geedo u baahan yihiin in la waraabiyo daqiiqad ah calaamadaha ugu horeeya ee qalajinta dhuleed.
Ma taqaanaa? Markaad isticmaasho abuurka, waxaa jiri kara isbeddello muuqaal ah. Midabka caleenta wuu kala duwanaan karaa.
Xeeladaha beeraha guuleysta
Si loo helo beerashada guuleysiga ee Caladium waxay u baahan tahay waraabinta saxda ah, quudinta waqtigeeda iyo meel raaxo leh. Oo weli waxaa haboon in ay fiiro gaar ah u yeelato qaar ka mid ah xirfadaha ee geedi socodka ah ee sii kordhaya ubax.
Caleemaha Caladium waa in aan la sifeynin. Boorashka waa in lagu rusheeyaa burushka ciriiriga leh (dhibco madow waxay ku samaysan karaan caleemaha iyagoo isticmaalaya maro qoyan).
Dhirta tuberada lagama miiri karo korka (haddii kale waa qudhmi karaa). Waxay u fiicantahay inaad biyo ku qorto dheriga dheriga.
Calamad badana wuxuu keenaa xasaasiyad. Waxaad u baahan tahay inaad la shaqeyso gacmo gashi.
Inta badan, dhirta waxaa saameeya dhecaan. Marka sanadkiiba la daaweyn karo daaweynta macnaheedu waa cayayaankan.
Caladium wuxuu kudhaca ugu fiican carrada acidic.
Kuwani waa dhammaan waxyaalihii aad u baahnayd inaad ogaato markaad kor u qaadeyso Caladium. Adeecinta talooyinka fudud, waxaad ku farxi doontaa muuqaalka qurxoon ee ubaxaaga.